'दिलवाले'सँग किन डराए नेपाली निर्माता ? – Namaste Filmy
'दिलवाले'सँग किन डराए नेपाली निर्माता ?
आउदो शुक्रबार बलिउडकै निकै प्रतिक्षित शाहरुख खान तथा काजोलको फिल्म ‘दिलवाले’ रिलिज हुदैछ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको क्रिसमस लक्षित फिल्म रिलिज गरिन लागिएको हो । यस अर्थमा क्रिसमस होलिडेका सबै दर्शक फिल्मले तान्नेछ ।
तर सो दिन रिलिज हुने नेपाली फिल्म भने अहिलेसम्म देखिएको छैन । यहि मौकामा दर्शना आर्टसले अहिलेसम्मकै महंगो रकममा दिलवाले लाई नेपाल भित्र्याएको छ । त्यसैले क्रिसमसका सबै नेपाली दर्शकले दिलवाले हेर्नेछन । हिन्दी रुचाउने र शाहरुख, काजोलका फ्यानलाई त ठिकै होला तर वास्तविक नेपाली कथा खोज्ने दर्शकले भने बाध्य भएरै हिन्दी फिल्म हेर्नुपर्नेछ ।
अब प्रशन रह्यो, सो दिन नेपाली फिल्म किन रिलिज गरिएन ? के नेपाली निर्माताहरु शाहरुखको क्रेज र स्टारडमसँग डराएका हुन त ? कुनै पर्व र विशेष दिनमा तीन चार वटासम्म नेपाली फिल्म भिडाउन तयार हुने नेपाली निर्माताहरुले ‘दिलवाले’ रिलिजका दिन किन एक फिल्म पनि रिलिज गरेनन् ?
'लिटरका लिटर पोखियो' दिलिप र अनुको माया । भिडियो
कसको यादमा जिउदै छन् हरी ? भिडीयो हेर्नुस्